जनता आवासका घर मानिस नबस्दै भत्किन थालेपछि…. « News24 : Premium News Channel
जनता आवासका घर मानिस नबस्दै भत्किन थालेपछि….
टीकापुर । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ सूर्यपुरका प्रेम वादीको घर भत्किसकेको छ । उनको घरको भित्तो मात्रै छ । प्रेमको सपरिवार भारतको भाइन्दरमा बस्न बाध्य छन् ।
सूर्यपूरमैै घर भएका गौरी वादी, निर्मल वादीका परिवार पनि भारतमा छन् । किरण वादी कैलालीकै चौमालामा बस्छन् । तारादेवी नजिकैको सती बजारमा बस्छिन् । प्रेमको जस्तै गौरी, निर्मल, किरण, ताराका घर पनि मानिस नबस्दा भत्किन थालेका छन् । यी घरहरु सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनेका हुन् । सरकारले कैलालीमा वादी र राजी समुदायका लागि घर बनाई दिएको छ तर बनेका घर मानिस नबस्दै भत्किन थालेका छन् ।
काम गर्न भारत वा नेपालकै अन्य शहरतिर बस्ने वादी समुदायका लागि बनाएका घर अलपत्र छन् । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ सूर्यपुरमा ११ वटा घरमा अहिलेसम्म मानिस बसेका छैनन् । मानिस नबस्ने घर केही भत्किसकेका छन् भने केही भत्किन लागेका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रमले घर दिने भएपछि सूर्यपुरको वादी परिवारले आफूसँग भएको घरवास टुक्राटुक्रा पारेर बाबु र ससाना छोराका नाममा अलगअलग घर बनाएका छन् । सूर्यपुरकै नरेश वादीलाई पनि जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाइ दिएको छ ।
उनका दुई छोरा सरदीप र बबीका लागि पनि घर त बनेको छ तर उनीहरुका नाममा बनेका घरमा कोही बस्दैनन् । जेठो छोरा सरदीप रोजगारीका लागि भारतमा छन् भने कान्छो बबी बाबुआमासँगै बसिरहेका छन् । सरदीप र बबीका घर पनि नबस्दै भत्किने अवस्थामा छन् । घर पाउने आशामै सूर्यपुरको वादी बस्तीका ३२ परिवारले ५० भन्दा बढीका नाममा घर मागेका छन् ।